Amal: ‘Waxaan karantiil 10 cisho ah ku galay London, anigoo aan gelin dalkii aan u socday.’ - Somnieuws.com
Amal: ‘Waxaan karantiil 10 cisho ah ku galay London, anigoo aan gelin dalkii aan u socday.’
Gabadh Soomaaliyeed oo ka tirsan shaqaalaha caafimaadka NHS ee dalka Ingiriiska iyo laba caruur ah oo ay dhashay, ayaa lagu karantiilay hoteel xabsi oo kale ah oo ku yaalla London ka dib markii laga soo celiyey Turkiga, loona diiday inay dalkaasi gasho.
Amal oo 30 jir ah, haysatana baasaboor Soomaali ah, ayaa gabadhaheeda oo da’dooda ay kala tahay 3 iyo 7 jir, ayaa doonaysay inay fasax bil ah ku soo qaadato Turkiga oo ay soo aragto eheladeeda jooga magaalada Ankara.
Laakiin waxaa hadda lagu qasbay inay karantiil 10 cisho ah ku gasho hoteelka (Holiday Inn) ee ku yaalla Slough, London, ka dib markii laga soo celiyey Turkiga oo loo diiday inay dhaafto garoonka.
Amal waxay u sheegtay warbaahinta Ingiriiska inay ku nooshahay London ayna haysatay fiishaha Turkiga ee dalxiiska loogu talagalay, ayna UK deegaan ku aheyd muddo 9 sanno ah. Ma garanayo bay tiri sababta la iisoo celiyey.
Waxay tiri markii aan London ku soo laabtay waxaan bixiyey £3000 oo aan aniga iyo caruurteyda karantiil ku ahaanayno hoteel xabsi oo kale ah muddo 10 cisho.
Waxaa dareemay bay tiri in la iila dhaqmay sida ka xun maxbuuska. Cuntada hoteelka ma wanaagsana, waxaana naloo ogol yahay inaan hawada banaanka qaadano 20 daqiiqo oo keliya maalintii, inta kale waxaan ku xabsinahay qolka hoteelka.
Arrinta iigu darneyd waxay tahay bay tiri in markii aad weydiisato inay dhaqanayso (mayranayo) dharka caruurtaada, ay kuu sheegayaan inay sugto 72 saacadood. “Xitaa la iima ogolaan in ninkeyga oo London jooga uu ii keeno cunto iyi dhar nadiif ah.”
“Markii aan dhaqdo dharka caruurta markiiba la iima siinayo ilaa inta laga hubinayo inay ka bad qabaan virus-ma corona. Halkan waxaa xitaa dhaama xabsiga” ayey tiri Amal.
Amal waxay horey u qaadatay talaalka corona oo buuxa, waxayna haysatay cadeynta PCR ee ah in xanuunka laga waayey.
Amal waxay kaloo sheegtay in xaalad adag ay ku gashay garoonka diyaaradah Turkiga. waxay igu xireen bay tiri qol, iyagoo iyaga qaaday taleefoonkii iyo waraaqahii ay aan watay, iyadoo aan wax cunto ah aan la isiin. “aad baan u argagaxay, waxaana dareemay ina la iila dhaqay sida inaan argagixiso ahay”
Waxaa la iigu hanjabay bay tiri in la i ganaaxayo £10,000 (Toban kun oo Pound) haddii aan u hogaansamin waxa la i farayo. Amal ma aysan cadeyn sababta loogu diiday in ay gasho Turkiga oo London loogu soo celiyey.
Turkiga ayaa ka mid ahaa dalalka ay dowlada Ingiriiska gelisay liiska cas ilaa bishii May, taasoo macnaheedu yahay in qof kasta oo qaangaar ah ama caruurta da’doodu ay ka weyn ka tahay 11 jir ee ku soo laabanaya UK uu bixinayo £1,750 oo lagu karantiilayo hoteel gaar ah muddo 10 cisho ah.
Aqoon-iswaydaarsi looga hadlayay qoddobo muhiim ah oo lagu qabtay Nederlands [SAWIRRO]
Jaaliyadda Holland oo martiqaad gaar ah u samaysay orodyahan Cabdi Nageeye [Sawirro]